पुस मसान्तसम्म २५ हजार बढीले पाए कोरोना बीमाको रकम, २७२१ आवेदकको फाइल फिर्ता Bizshala -
पुस मसान्तसम्म २५ हजार बढीले पाए कोरोना बीमाको रकम, २७२१ आवेदकको फाइल फिर्ता
काठमाण्डौ । पुस मसान्तसम्म कोरोना बीमाबापत २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढी दाबीभुक्तानी भएको छ।
बीमा समितिको पछिल्लो आँकडाअनुसार पुस २९ गतेसम्म २५ हजार ३१३ जनाले कोरोना बीमाबापत २ अर्ब ४६ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका हुन्।समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पूरा भएको दाबी संख्या ५१ हजार ७१७ रहेको छ।
यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाइएकामध्ये २ हजार ७२१ फाइल कागजपत्र नपुगेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीमै फर्काइएका छन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा प्रमाणीकरणका लागि पेन्डिङमा रहेका फाइलको संख्या ८ हजार ४० रहेको छ।
महाशाखामा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका १४ हजार १६५ फाइलमध्ये अहिलेसम्म ६ हजार १२५ फाइल प्रमाणीकरण भइसकेको समितिले जनाएको छ। प्रमाणीकरणका लागि महाशाखामा पठाउन तयार अवस्थामा रहेको फाइलको संख्या ७४७ रहेको छ।
यसैगरी १० हजार ९७४ फाइल भने भेरिफिकेसन प्रक्रियामा रहेको र १८३ फाइल भने नक्कली भएका कारण दाबी भुक्तानी नगरिएको समितिले जनाएको छ।
काठमाण्डौ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा थामिनसक्नु आवेदन...
आईपीओ जारी गर्नकै लागि एलआईसी भारतको अधिकृत पुँजी बढाउने
काठमाण्डौ । आईपीओ जारी गर्न लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष...
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स दियो कर्मचारी ‘सम्पत्ति
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना...
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले आ.व. २०७५/७६ का लागि लाभांश नबाँड्ने
शिखर रणनीति : मर्जरको छलफल छाडी हकप्रदको बाटोतर्फ
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मर्जरको...
शिखर इन्स्योरेन्सले डाक्यो एकैपटक २ आ.व.को वार्षिक साधारणसभा,
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १५ औँ तथा १६...
च्याटबटबाटै शिखर इन्स्योरेन्सका सेवा लिन चाहने ग्राहकको
काठमाण्डौ । डिजिटल इन्स्योरेन्समा उचाइ चुम्न सफल शिखर इ�...